Ndị na -emepụta ihe & ndị na -eweta ihe nkwụnye kwụ ọtọ Ụlọ ọrụ na -ebuli ibu ibu kwụ ọtọ nke China
Igwe na -ebuli elu kwụ ọtọbụ ngwaahịa emebere na ụlọ ọrụ mbuli ụgbọ ibu. Akụrụngwa na-eji cylinders hydraulic dị ka ike bụ isi, ọ na-ejikwa ụdọ dị arọ na ụdọ waya iji hụ na nchekwa igwe zuru oke. Igwe mbuli ụgbọ mmiri kwụ ọtọ anaghị achọ olulu na ime igwe.
Igwe ụgbọ elu anọ kwụ ọtọ nwere ọtụtụ uru emelitere ma e jiri ya tụnyere igwe mbuli ụgbọ elu abụọ, nnukwu ikpo okwu, nnukwu ikike na ịdị elu elu ikpo okwu. Mana ọ chọrọ ebe nrụnye ka ibu yana ndị mmadụ kwesịrị ịkwadebe ike AC atọ maka ya.
Enwere ike ịhazi mbuli ụgbọ elu kwụ ọtọ ụzọ abụọ site na ihe ndị ahịa chọrọ, nha ikpo okwu, ikike na ịdị elu nke ikpo okwu nwere ike dabere na ihe ị chọrọ. Mana nha ikpo okwu enweghị ike ibu nnukwu ibu, n'ihi na enwere naanị okporo ụzọ abụọ edoziri ikpo okwu .Ọ bụrụ na ịchọrọ nnukwu ikpo okwu ....
Mbuli ụgbọ elu kwụ ọtọ nke China dabara adaba maka olulu ndị a na -enweghị ike igwu, nwughari ụlọ nkwakọba ihe, shelves ọhụrụ, wdg, ọ dịkwa mfe ịwụnye na idobe ya, ma maa mma. , Njirimara nchekwa na adaba ọrụ. N'ezie, a ga -emerịrị mmepụta akụrụngwa dị ka ọnọdụ nrụnye akọwapụtara nke ọma yana ihe onye ahịa chọrọ. Nke mbụ, ekwesịrị ịhazi mbuli ibu ebubere dabere data dị mkpa yana ozi onye ahịa nyere ya. Mgbe nkwenye ugboro ugboro na enweghị nsogbu, nrụpụta na nrụnye na ntinye na -esote na -arụ. Chere maka ọrụ. N'ihi na ebuli ngwongwo kwụ ọtọ ga -aharịrị nrụpụta ahaziri iche, anyị emeghị ya ụdị ọkọlọtọ maka ya, kama mmepụta niile ahaziri dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.